ko htike's prosaic collection: December 2008
Posted by ကိုထိုက် at 09:50 24 comments
မြန်မာပြည်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဈေးသက်သက်သာသာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ .. တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းတပါးမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အမြဲ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ ကိစ္စကတွေထဲက တစ်ခုကတော့ မိသားစုနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားမပြောရတာပါပဲ။
လက်ရှိ ကျွန်တော် အခု ခဏ ရောက်နေတဲ့ UK ကနေ စင်္ကာပူကို ဖုန်းဆက်မလား၊ အလကား လောက်နီးနီးကို ဖုန်းဆက်ခက သက်သာတယ်။ အင်္ဂလိပ် ငွေ £1 တန် ဖုန်းကတ်ဝယ်လိုက် မိနစ် ၁၀၀ ကျော် ဆိုတာ အသာလေးပဲ။ ထိုင်းကို ဆက်မလား၊ အမေရိကန်ကို ဆက်မလား ... အလားတူ အလကားနီးပါးကို ဆက်လို့ရတယ်။
တချို့ VOIP ဖုန်း စနစ်နဲ့ဆို ခုနက ပြောတဲ့ နိုင်ငံတွေကို အလကားတောင် ဆက်လို့ရသေးတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ကွန်ပြူတာသုံးပြီး ဟိုဘက်က တယ်လီဖုန်းကို လှမ်းဆက်တာပေါ့။ တပြားမှ မကုန်ဘူး။ တနေကုန် ပြောနိုင်သလောက်သာပြောပေတော့။ မိသားစု စကားပြောပြော၊ အလုပ်ကိစ္စ ပြောပြော၊ သမီးရည်းစားရှိလို့ လွမ်းလွမ်း အခမဲ့ ပြောလို့ လွမ်းလို့ရတယ်။
အဲ .. မြန်မာပြည်ကို ဆက်မှာလား၊ UK က နေ ဈေးအသက်သာဆုံး ဖုန်းကဒ်က £5 ကို မိနစ် ၁၀၀ ကျော်ဆိုတာ ကံကောင်းရင် ရတတ်တယ်။ ဒါတောင် ဘယ်ဖုန်းကဒ်ကောင်းသလဲ လိုက်စုံစမ်းနေရသေးတာ။ ဖုန်းကဒ်ဆိုတာကလည်း မသေချာပါဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ မိနစ် ၁၀၀ ကျော်ရလို့ အားကိုးပြီး အများကြီး ဝယ်မထားနဲ့ နောက်ရက်တွေမှာ ရချင်မှ ရတာ။ (ကျွန်တော် ဒီတိုင်းပြည်ရောက်ခါစကဆို £20 ဖုန်းကဒ်ကို မိနစ် ၄၀ ပဲ ရတယ်။)
ကွန်ပြူတာ ကနေ ဟိုဘက်က ဖုန်းကို လှမ်းခေါ်တဲ့ VOIP ဖုန်းစနစ်နဲ့ မြန်မာပြည်က ဖုန်းကို ခေါ်မလား။ သူလည်း ထူးမခြားနားပါပဲ။ တမိနစ်ကို £0.40 လောက် ကျတယ်။
အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် မြန်မာပြည်ကို သက်သက်သာသာ ဖုန်းခေါ်လို့ရနိုင်တဲ့ VOIP လို ကွန်ပြူတာကနေ ဖုန်းခေါ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို မြန်မာတွေက Gtalk ကို သုံးပြီး ခေါ်နိုင်အောင် တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ ခေါ်လို့ရတဲ့ ဈေးနှုံးတွေကို နိုင်ငံအလိုက် ကြွဲ ပားမှု ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဈေးနှုံးကတော့ .. မြန်မာပြည်ကို ခေါ်ရင် တမိနစ်ကို US $0.18 တဲ့။ (£0.12 လောက်ရှိမယ်။) မြန်မာပြည်ကနေ ပြန်ခေါ်ရင်တော့ တမိနစ်ကို US $0.2 (£0.1 ကျော်ကျော်ပါပဲ။) အလကားနီးပါးပေါ့။
ဒါဆို ဘယ်လို ခေါ်ရလဲ၊ ဘယ်လို ပိုက်ဆံ ပေးရလဲ ဆိုတာတွေက မေးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
သူ့ website ထဲမှာလည်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ website က တော့ www.bamartalk.com မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ပထမ လိုအပ်တာက Gtalk အကောင့် တစ်ခု၊ bamar talk အကောင့် တစ်ခု လိုပါတယ်။
Gtalk အကောင့်က ဖုန်းခေါ်ဖို့ကို သုံးရပြီး၊ barmar talk အကောင့်ကတော့ ပိုက်ဆံထည့်ဖို့ အတွက်ပါပဲ။
ပိုက်ဆံ ဘာနဲ့ ထည့်လဲ ဆိုတော့ .. အင်တာနက် သုံးတဲ့ လူတွေ အားလုံး သိကြတဲ့ paypal အပြင် အခြားသောနည်းလမ်းများစွာနဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်။ (burma talk အကောင့်အတွက် register လုပ်တဲ့အခါ သုံးတဲ့ password က Gtalk password နဲ့ တူစရာ မလိုပါဘူး။ တချို့က ရောထွေးမြင်တတ်ပြီး gtalk အတွက် password ခိုးခံရမယ့် ပြဿနာ စိုးရိမ်မှု မဖြစ်ရအောင်ပါ။)
register လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ သူက နံပါတ် (PIN) တစ်ခုကို ကိုယ့်အတွက် မေးလ်ကနေ အလိုအလျှောက် (auto) ပို့ပါတယ်။ ပိုက်ဆံက အဲဒီ နံပါတ်ထဲမှာပါ။ ကိုယ်က ဖုန်းခေါ်ချင်ရင် ကိုယ့် gtalk ထဲကနေ call_at_barmartalk.com@gtalk2voip.com ဆိုတဲ့ အကောင့်ကို add လုပ်လိုက်ပါ။ (သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို add လုပ်သလိုပါပဲ။)
သူငယ်ချင်းနဲ့ gtalk ပေါ်ကနေ စကားပြောသလိုပဲ call ကို နှိပ်လိုတာနဲ့ သူက ခုန (PIN) ကို တောင်းပါမယ်။ အဲဒီ PIN နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး (#) ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ သူက အကောင့်မှာ ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာ ပြောပါမယ့်။ အဲဒါ ပြီးတာနဲ့ ကိုယ် ခေါ်ချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို နှိပ်ပြီး၊ ခုနကလိုပဲ (#) ထပ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဟိုဘက်က ကိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ စကားပြောလို့ ရပါပြီ။ ဖုန်းပြောပြီးရင်တော့ end ပေါ့။
promotion တစ်ခုလည်း ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို Invite လုပ်ပြီး ကြေငြာပေးထားရင် အဲဒီသူငယ်ချင်းက ပိုက်ဆံထည့်တိုင်း ကိုယ်က ၁၀ % အလိုလို ရနေမှာပါ။
ကဲ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ မိသားစုကို စကားပြောလို့ ရနိုင်ကြပါစေဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 07:43 14 comments
ကျွန်တော်တို့၏ ရဲဘော် မိတ်ဆွေ ကိုမျိုးချစ်(www.myochitmyanmar.org)၏ ဖခင် ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ ဦးထွန်းထွန်းနိုင် ကွယ်လွန်သွားသည်ဟု ကြားသိရသဖြင့် ကိုမျိုးချစ်နှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းမိတယ်ဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 22:277comments
Posted by ကိုထိုက် at 22:589comments
Posted by ကိုထိုက် at 21:209comments
Posted by ကိုထိုက် at 22:32 10 comments
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် သိမ်းပိုက်ထားသော သောင်းကျန်းသူ လူတစ်စု၏ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် မြန်မာပြည်ကို ချစ်သော နိုင်ငံသားတိုင်း ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရမည် ဆိုတာကို သဘောတရား တစ်ခုအရ အားလုံး လက်ခံထားပြီး ဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသော ခေါင်းဆောင်များ၏ မိန့်ခွန်းများ၊ လူထု လေးစားကြည်ညိုရသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမှာစကားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခမ်းအနားများတွင် ကျင်းပပြောဆိုသော စကားလုံးများတွင်လည်း အဆိုပါ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အားလုံး အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပြီး သောင်းကျန်းသူများကို တိုက်ထုတ်ရန် ပြောဆိုနေကြသည်မှာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် အင်တာနက် စာမျက်နှာများ၊ ဆောင်းပါးများ ဆွေးနွေးဝိုင်းများလည်း စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးဆိုသော စကားလုံးမှာ အရေးပါ အရာရောက်သော ခေါင်းစဉ် အဖြစ် ဆွေးနွေးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
သို့သော် ဒီနေ့ အချိန်အထိ ထိထိရောက်ရောက်ဖြင့် မည်သို့ မည်ပုံ ညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်မည်ဆိုသော အလုပ်သဘောဆန်သည့် လမ်းစဉ်မျိုးကိုကား ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက် မတွေ့ရှိသေးပါ။
ကျွန်တော် တွေးမြင်ကြည့်သလောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမည် ဆိုလျှင် ညီညွတ်ရေးရှိသင့်တယ် ဆိုတာကို အခြေခံသဘောအရ အားလုံး လက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ညီညွတ်ရေး လိုအပ်တယ်၊ လုပ်ရမယ် ဆိုတာကို ပြောဆိုနေကြသော အချိန်ကို ကျော်လွန်ပြီး .. ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်သင့်သလဲ၊ လုပ်နိုင်သလဲ ဆိုတာတွေကို အရေးထား စောင်းပေး ဆွေးနွေးကာ တကယ် လက်တွေ့ဆန်သော လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ညီညွတ်ရေးကို ဖေါ်ဆောင်ရန် အချိန်တန်ပြီလို့ ထင်ပါသည်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး .. “လူ” .. ဆိုတဲ့ လူသားတိုင်း အတ္တ၊ မာန၊ လောဘ ဆိုတာတွေရှိတာကြောင့် တပုံစံတည်း ညီညွတ်နိုင်ဖို့က ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ သာမန် မြင်နေသော စကားလုံးတွေကို သေချာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ရှင်းလင်းဖို့ လိုလာပြီထင်ပါတယ်။
(နောက်ထပ် အဆင့် တစ်ခုသို့ ရောက်ရန် ဒီနေရာမှာ ညီညွတ်ရေး ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပြီလား ဆိုသော မေးခွန်းကို အားလုံး ဖြေပြီး အားလုံး၏ စိတ်ထဲတွင် ညီညွတ်ရန်လိုအပ်သည် နောက်တစ်ကြိမ် ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ဆောင်ကြပါဆိုသော တိုက်တွန်းစကားမျိုး ပြောကြားရန် မလိုအပ်သော လက်ခံခြင်းမျိုးအထိ လက်ခံထားရန် လိုအပ်ပါသည်။)
၁။ ညီညွတ်ရေးနှင့် ပုံစံတူ ပြုလုပ်ရေး ကွဲပြားချက်
ပုံစံတူ ပြုလုပ်ရေးနှင့် ညီညွတ်ရေး ဆိုတာကို ရောထွေးနားလည်တတ်ကြတာကို ညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်မှု စကားဝိုင်းတိုင်းမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ညီညွတ်ရေးအတွက် ပြောဆို ဆွေးနွေးကြတိုင်း ပုံစံတူ ပြုလုပ်ရေးဆိုသည့်ဘက်ကို ရောက်ရှိသွားတတ်ကြပြီး အတ္တ မာန တွေနှင့် .. လိုအပ်သော ညီညွတ်ရေး မရပဲ မလိုအပ်သော အမုန်းတရားတချို့ မမြင်ကွယ်ရာမှာ ကြီးထွားလာတတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပုံစံတူ ပြုလုပ်ရေး ဆိုသည်မှာ စက်ရုံ တစ်ရုံမှ “ကား” မော်ဒယ်တစ်ခုကို အမြောက်အများ ထုတ်လုပ်သလို ပုံစံတူ ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိသည့် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊
ညီညွတ်ရေး ဆိုသည်မှာ ကားတစ်စီးဖြစ်မြောက်ရန် ပုံစံ မတူသော အစိပ်အပိုင်းများ အတူတကွ တွဲစပ်တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်သူ နအဖအား တိုက်ထုတ်ရေးဆိုသည်မှာ ကားတစ်စီးကို တည်ဆောက်ရန်သာဖြစ်ပြီး၊ ကားအမြောက်အများကို ပုံစံတူ ထုတ်လုပ်ရန်မဟုတ်ပါ။
ပုံစံတူပြုလုပ်ခြင်းမှာ ၁၉၈၈ ကာလက မြန်မာ့မြေပေါ်မှ မောင်းထုတ်လိုက်သော မဆလ ဆိုရှယ်လစ် စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ ညီညွတ်ရေး ဆိုသည်မှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အစည်းတွေမြောက်များစွာရှိလည်း ကိစ္စ မရှိပါ၊ မတူညီသော အမြင်တွေ ရှိလည်း ကိစ္စ မရှိပါ။ မတူကွဲပြားခြားနားနေခြင်းသည်ပင် “အား” တစ်ရပ်ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုသို့ မတူ ကွဲပြားခြားနားနေသော အင်အားစုများကို တစ်စု တစည်းတည်း ပုံစံတူ ပြုလုပ်ရေးထက် အတူတူ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သော ညီညွတ်ရေးတစ်ခု တည်ဆောက်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
၂။ အာဏာရှင် စနစ် နှင့် ခေါင်းဆောင် စနစ်
အာဏာရှင်နှင့် ခေါင်းဆောင် ဆိုသော စကားလုံးကိုလည်းရောထွေး တတ်ကြပါသည်။
အားလုံး အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့်အခါ ဦးဆောင်မှုပေးသော ခေါင်းဆောင်ကို ရွေးချယ်ကြရသည့်အခါ အာဏာရှင်ဆိုသော အမြင်နှင့် ခေါင်းဆောင် ဆိုသော အမြင်ကို ခွဲခြားမြင်တတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
အာဏာရှင် စနစ် ဆိုသည်မှာ ထိပ်ဆုံးမှ လူပုဂ္ဂိုလ်၏ စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ဆောင်ရသော စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ ခေါင်းဆောင် စနစ် ဆိုသည်မှာ တိကျသော မူဝါဒကို တာဝန်ယူ ဖေါ်ဆောင်ပေးရသော စနစ်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါ အတူတူ ပူးပေါင်း လုပ်ကြမည်ဟု ဆိုလျှင် အရင်ဆုံး မြင်လိုက်သည့် အချက်မှာ ဘယ်သူက ပူးပေါင်းမှုမှာ ခေါင်းဆောင်မှာလဲ(အာဏာရှင် လုပ်မှာလဲ) ဆိုတာကို အရင် ကြည့်တတ်ပြီး၊ ... တကယ့် အရေးပါသော မူဝါဒတစ်ခုကို ဘယ်လိုဖေါ်ဆောင်မလဲ၊ ဘယ်လို မူဝါဒတွေကို ငါတို့ ချမှတ်မလဲ၊ ခေါင်းဆောင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ဘယ်လို ကန့်သတ်မလဲဆိုသော တွေးခေါ် ပြောဆိုမှုအားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
လူပုဂ္ဂိုလ် အာဏာရှင်ကို ဦးတည်စဉ်းစားသော အာဏာရှင် ပုံစံကို မြင်မိသောအခါ ထိုလူပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အားနည်းချက်များကိုပါ ထည့်သွင်းပြောဆို အပြစ်မြင်တတ်လာကာ ဘေးတွင် မကျေမနပ်ပြောဆိုသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တရပ် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ (ထိုသို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပြောဆို တိုက်ခိုက်နေမှုများကို ယနေ့အထိ မြင်တွေ့နေရသည်မှာ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ သောင်းကျန်းသူ နအဖ စိတ်ကြိုက် ဖြစ်နေပါသည်။)
အကယ်၍ မူဝါဒကိုသာ ဖေါ်ဆောင်သော ခေါင်းဆောင်မှု စနစ်ဖြင့် သွားမည်ဆိုလျှင် ညီညွတ်စွာ အတူတူ လုပ်ကိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အားလုံး တူညီသော မူဝါဒ ချမှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးခင်၊ ခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးခင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စကားလုံးများကို ထပ်မံရေးပါဦးမည်။
(မှတ်ချက် ။ ကျွန်တော်၏ အတွေးအခေါ်နှင့် မြင်တာ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်၊ အားနည်းချက်၊ ဆွေးနွေးရန် အချက်များရှိပါက မေးလ်သို့လည်းကောင်း၊ comment တွင်လည်းကောင်း ဆွေးနွေးဝေဖန်နိုင်ပါသည်။)
Posted by ကိုထိုက် at 12:19 12 comments
၂၁ ရာစု ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်သော မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး
နအဖ အဖွဲ့ဝင် လူကြီးများ၏ မအိပ် မနေ နေ့မအား၊ ညမအား တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်ကား အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ် မျက်မြင် တွေ့မြင်နိုင်ကြရန် အလို့ငှာ ရန်ကုန် ရွှေမြို့တော်ကြီး လျှပ်စစ်မီး ဖြန့်ဖြူးရေး အချိန်ဇယား တစ်ခုကို ပြန်လည် ဝေငှ လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက် ... မီးရမည်ဟု ပြောသည့် အချိန်တွင်လည်း သဘာဝ လမင်း၏ အရသာကို ပြည်သူလူထု အပြည့်အဝ ခံစားစေရန် ရည်မှန်းချက်ထား၍ ဖြတ်တောက်ခြင်းများလည်း မကြာခဏ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း သိရှိသလောက် ပြန်လည် ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။)
၂၁ ရာစုရဲ့ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်သော စည်းကမ်းကျနသည့် မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဒီမိုကရေဆီ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဆီသို့ ချီတတ်ရန် ရန်ကုန်မြို့သို့ လျှပ်စစ်မီးပေးချိန် ဇယား၊
Posted by ကိုထိုက် at 11:557comments
Posted by ကိုထိုက် at 09:54 17 comments
(၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလအတွင်းက လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူ စစ်အုပ်စုမှ အဓမ္မ ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်စဉ် စင်္ကာပူရောက် မြန်မာများ၏ ကမ္ဘာသိ ထုတ်ဖေါ်ခဲ့သော ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှု မြင်ကွင်းတစ်ခု)
ထိုနေ့ကတော့ မှတ်မှတ်ရရ နေ့တစ်နေ့ပေါ့။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မိသားစုနဲ့ခွဲ သူများခိုင်းသမျှ ကျွဲလိုနွားလိုရုံးကန် ပြီး ရသမျှထဲက ၁၀% ကို အခွန်ရုံးလုံ့ခေါ်ကြတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကို ပေးဆောင်ဖို့အတွက် orchard ကို မနက်စောစော ထွက်လာခဲ့တယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း သံရုံးဝမှာ ကိုယ့်လိုပဲ မပျော်ရွင်တဲ့ မျက်နာတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ရောက်နှင့်နေတဲ့သူတွေ ဟိုတစ်စုဒီတစ်စု ထိုင်ရင်း ရုံးဖွင့်ချိန်ကို စောင့်နေကြတယ်။
ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ သံရုံးခြံစည်းရိုး ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ A4 (ရေစိုနေပြီဖြစ်တဲ့) စာရွက်ပေါ်မှာ ကိုယ့်အမည်ကို ရေးဖို့ ကျောင်းသားတစ်စုရဲ့နောက်မှာ ရပ်စောင့်နေခဲ့တယ်။ သူတို့လေးတွေပြောနေကြတဲ့ စကားတွေကို နားမထောင်းပဲ အတိုင်းသားကြားနေရတယ်။ သူတို့တတွေပြောနေတာက သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်နိုင်ငံသား ပြောင်းသွားတဲ့ကြောင်းပါ။ ဒါနဲ့ပဲ သူတို့ကို မေးစမ်းကြည့်တော့ နိုင်ငံသားပြောင်းရတဲ့ ကြောင်းပြချက်က သံရုံးနဲ့ မဆက်ဆံချင်လို့တဲ့လေ။ သြော် နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာ တစ်ယောက်ဟာ အနည်ဆုံး သုံးနှစ်မှာ သံရုံးကိုတစ် ခေါက်တော့မဖြစ်မနေလာရတာ ပဲလေ။ စိတ်ထဲက တွေးနေမိတာက သြော် ဒို့နိုင်ငံ အနာဂတ် လေးတွေဆုံးရှုံး နေရတယ်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ၉ နာရီထိုးလို့ သံရှုံးဖွင့်တဲ့အခါ အထဲကိုဝင်ပြီး ထိုင်စောင့်ဖို့နေရာရှာကာ ကိုယ်အလှည့်ရောက်ဖို့စောင့် ရတာပေါ့။ သာမန်အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ living room တစ်ခုစာကို ဗီဇာ ဌာန (visa session) နဲ့ ကောင်စစ်ဌာန ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်း ပိုင်းထားတဲ့ အခန်းသေးသေးလေးထဲ မှာ လူ သုံး လေး ဆယ်လောက်နဲ့ ပြည့်ညှပ်နေတယ်။ အပြင်မှာလဲ သုံးလေးဆယ်လောက်က ဟိုထိုင်ဒီထိုင်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ 9:30 လောက်ကစလို့ ၁၅ မိနစ်ကို လူ ၅ ယောက်နှုံးလောက်နဲ့ ခေါ်ပြီး အခွန်ဆောင်ဖို့လျောက်လွှာ လက်ခံတယ်။ အဲခုနကပြောတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေက ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်မေးနေတယ် ကျောင်း သားဖြစ်ကျောင်း ထောက်ခံစာ ဘယ်မှာတန်းစီရမလဲပေါ့။ ဒါနဲ့ စပ်စုတတ်တဲ့ကျွန်တော်လဲ မေးကြည့်လိုက်တယ် ကျောင်းသားဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာကို ကျောင်းကမတောင်းပဲ ဘာလို့ သံရူံးကတောင်းသလဲပေါ့။ ဒါနဲ့ကျောင်းသား တစ်ယောက်ကပြန်ဖြေတယ် ရန်ကုန်လေဆိပ်က လူဝန်းမှုကြီးကြပ်ရေးက သံရုံးက ထောက်ခံစာကို ပဲ အသိအမှက်ပြုသတဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ် ညီလေးတို့က ဘယ်ကျောင်းကလဲပေါ့။ Nanyang Technological University (NTU) ကပါတဲ့။ ကျွန်တော်လဲ တော်တော် အံသြသွားတယ် NTU လို world recognize ဖြစ်တဲ့ကျောင်းမျိုးက စာကို ရန်ကုန်လေဆိပ်က လူဝန်းမှုကြီးကြပ်ရေးက ဘာကြောင့် recognize မဖြစ်သလဲ လို့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ၁၀ နာရီလောက်မှာ အသက်ခပ်ငယ်ငယ် ၃၀ ၀န်းကျင် သံရုံးဝန်ထမ်း တစ်ယောက် စာအုပ်တစ်အုပ် ကိုင်လာပြီး ကျောင်းသားတွေကို အမည်ရေးခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ ထိုသူ နာရီဝက်လောက်ပျောက်သွားပြန်တယ်။ ၁၀နာရီခွဲလောက်ကြတော့ ခုနကလူငယ် ပြန်ထွက်လာပြီး လျှောက်လွှာတွေကို လက်ခံရင်း passport တွေကို စစ်နေတယ်။ ထိုသူငယ်ရဲ့မျက်နှာဟာ လုံးဝကိုတင်းမာနေပြီး စကားပြောရာမှာလဲ တော်တော့်ကို ရိုင်းစိုင်း တာကို တွေ့နေရတယ်။ သူအမြဲပြောနေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းက “ မင်းတို့ကို ငါက စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးနေတာ သိပ်ပြီးစောတက မတတ်နဲ့” တဲ့လေ . ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ဘယ်အချိန်ရမလဲ ၁၂ နာရီခွဲလောက်ရမလား ဆိုတော့ “ မင်းတို့ကို ငါက စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးနေတာ သိပ်ပြီးစောတက မတတ်နဲ့” ဆိုတဲ့စကားပြန်ပဲရတယ်. ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားမိတာက သူတို့တွေဟာ (သံရုံး ၀န်ထမ်း) သံရုံးကို အပျော်ခရီးထွက်လာပြီး သံရုံး တာဝန်တွေကို စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးနေသလား ပေါ့။ သူတို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘာတာဝန်မှ မရှိဘူး ဆိုတဲ့သဘောလားတော့ မသိဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက် passport နဲ့ စာရွက်တွေကို လုံးချေပြီး မျက်ရည်စတွေနဲ့ ပြေးထွက်လာတယ် သူ့သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်လောက်က နောက်က ပြေးလိုက်သွားတယ် အသက်၂၀ ကျော်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက် က အမျက်ဒေါသတွေနဲ့ ကောင်တာက သံရုံးဝန်ထမ်းကို ကြည့်နေ လေရဲ့။ ဒါနဲ့ကျနော်လဲ မနေသာတော့ပဲ ကောင်လေးကို သံရုံး အပြင်ကို ခေါ်ပြီး ဘာဖြစ်လဲ မေးတာပေါ့။ ဖြစ်ပုံက သူ့သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးက ၂၀၀၇ တုံးက အလုပ် လပိုင်း လုပ်ဖူးတယ် တဲ့။ အခွန်လဲဆောင်ပြီးသားပါ ဒါပေမဲ့ အပြေစာက သူနေတဲ့အဆောင်မှာ ကျန်ခဲ့တယ်တဲ့လေ။ အခွန်ဆောင်ပြီး ရန်ကုန်ကို တစ်ခေါက် ပြန် ထားပြီးသားပါ။ ဒါကို အဲဒီကောင်လေးက သူ့သူငယ်ချင်း အတွက် ကူ ပြောပေး တာပေါ့။ passport ထဲမှာ ပြန်ထားတဲ့ တဆိပ်တုံးရှိတယ် ပေါ့ ဆိုပြီးတော့။ အဲဒါကို ၀န်ထမ်း ကိုယ်တော်ချောက ဘေးလူဝင်ပြောရမလားဆို ပြီး မလုပ်ပေးပဲ passport ကို ပြန်ပေးလိုက်သတဲ့။ ကျွန်တော်က ကျောင်းသားလေးကို မေး ကြည်မိတယ် သူတို့ ရဲ့ computer ထဲ မှတ်တမ်းကို ပြန်ကြည့် ပေးလို့မရဘူးလားပေါ့။ အဲ…. ကျောင်းသားလေးပြန်ပြောတာ က ဒီရုံးမှာ computer မပြောနဲ့ လက်နိပ်စက်လေးတစ်လုံးတောင်များ တွေမိလို့လားတဲ့လေ။ အဲဒီကျောင်းသားလေး မသွားခင် နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ စကာတစ်ခွန်း က အခုအချိန်ထိ ကျွန်တော့ရင်ထဲ ကျန်နေခဲ့တယ် “ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ နိုင်ငံသားပြောင်းကြတာ နောက်ထပ် ပြောင်း မဲ့သူတွေလဲ အများကြီး တဲ့လေ”။ လူတွေ အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း အခုခေတ် စင်ကာပူက NTU, NUS ဆိုတာ မြန်မာပြည်ကထူးချွန် ထက်မြက်တဲ့ လူငယ်လေး ပညာဆီပူးရာ university တွေပဲလေ။ သူတို့တွေဟာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်းတွေဆိုရင်လဲ မှားပါဘူး။ သူတို့လေးတွေကို ကိုယ်နိုင်ငံအတွက် အဆုံးအရှုံမခံသင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ကတော့ယူဆမိပါတယ်။
သံရုံးကပေးတဲ အခွန်ပြေစာကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ရင်း ဒီလိုကျောင်းမျိုးမှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသာလေး တွေ ဆုံးရုံးနေရတာဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေ ဆုံးရှုံးနေ ရတာပဲဆိုတာတွေးရင်း အိပ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ ကျွန်တော့ရင်ထဲမှာ နာကျင်ကြေကွဲနေ ခဲ့ရပါတယ်။
60th Anniversary of International Human Rights Day Invitation
Posted by ကိုထိုက် at 12:186comments
SPDC's divide and rule policy
နအဖ သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ရေး ဘောလုံးပွဲ ပိုစတာ
စစ်အစိုးရ၏ သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ရေး တရားဝင် ပေါ်လွင်စွာ ပြန်လည် စတင်ခြင်းလား
(တောင်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခြင်း)
သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ- ရန်နိုင်
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့၊ မြို့မ အားကစားကွင်း တွင် (၂၀၀၈ ခုနှစ် ပယက (ပအဖ) ဥက္ကဌ ဖလား ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မြို့နယ်ပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ)ဲ ဟု အမည်ပေးထားသော ဘောလုံးပွဲ တစ်ခုကို နိုဝင်ဘာာ ၂၉ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပ လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲသို့ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မြို့နယ် များ ဖြစ်ကြသည့် ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင်၊ အမ်း၊ သံတွဲ၊ တောင်ကုတ်၊ ဂွ မြို့နယ်များ မှ ဘောလုံး အသင်းများ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
ယခု ပြိုင်ပွဲကို ရခိုင်ပြည်နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (ပအဖ) မှ ပြည်နယ် အဆင့် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကျင်းပရာတွင် တောင်ပိုင်း ဖလား ဟု တရားဝင် အမည် ပေးထားခြင်းမှာ စဉ်းစား ဖွယ် အချက်တစ်ခု ဖြစ်နေပါသည်။ နအဖ စစ်အစိုးရ အနေဖြင့် ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ နည်းတူ သွေးခွဲ ကျင့်သုံးရေး စနစ်ကို ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အား တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း ဟု ယခင်က တရားဝင် သုံးစွဲခြင်း မရှိခဲ့ဖူးပေ။ ဤသို့ခေါ် ဝေါ်သုံးစွဲ ခြင်းမှာမူ ယခု ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှ တရားဝင် စတင်သည် ဟု ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ခွဲခြား ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲ သွားခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်သူ ပြည်သားများ အတွင်း၊ တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း ဟူသော ဒေသစွဲ စိတ်များ၊ စိတ်ဝမ်း ကွဲပြားမှုများ ပေါ်ပေါ်လာအောင် တမင် ဖန်တီးလိုက်သော နအဖ၏ သွေးခွဲမှု ပေါ်လစီ လုပ်ရပ်၏ ပထမ ခြေလှမ်း ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။
နအဖ သည် ရှမ်းအမျိုးသားတို့ နေထိုင်ရာ တစ်ခုတည်းသော ရှမ်းပြည်နယ်ကိုပင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဟုလည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟုလည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ဟုလည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်သုံးခု ခွဲခြားပြီး ပအဖ သုံးခုဖွဲ့စည်းလျက် divide and rule policy ဖြင့် သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်လာခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုမျှ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်း တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း ဟူသော အခေါ်အဝေါ်များကို တရားဝင် သုံးစွဲလျက် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း သွေးခွဲ လာတော့ မည်လော ဆိုသည်ကို ဤဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်စဉ်မှ အစပြုလျက် စောင့်ကြည့် ကြရဦးမည် ဖြစ်ပေသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 09:57 10 comments
ကိုသိန်းစိန် ခေါင်းပြောင်ရသော အကြောင်းအရင်း
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီးကို နေ့မအား ညမအား ဖျက်ဆီးနေလိုက်တာများ အခု နောက်ဆုံး ပြည်ပမှာ ဒင်းတို့နဲ့ လွတ်ရာ ကျွတ်ရာ သွားနေ နေတဲ့ လူတွေကို အလုပ်ပေးမယ့် အကြံအစည်နဲ့ ဥာဏ်ကြီးလိုက်တဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင် ဝဏ်ကျီးခြုပ် ကိုသိဏ်းဆိန်။ ...... သူ့ခဗျာ အဲလို တိုင်းပြည်အတွက် အတွေးအခေါ်တွေ တွေးတတ်လွန်းလို့ ခေါင်းပြောင်နေတာသာ ကြည့်ကြပါတော့ဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 12:08 8 comments
Myanmar: PM Says Farm Sector Can Absorb Unemployed
YANGON, MYANMAR: Myanmar's prime minister has said that the country's economy can provide jobs for returning migrant workers who lost their jobs due to the global financial crisis.
All three state-run daily newspapers on Tuesday (2 Dec) published the remarks by Prime Minister Gen. Thein Sein, made atameeting with ministers, government officials and businessmen in the capital of Naypyitaw. It was the first public comment from the government on how the global crisis might affect the country.
In the remarks, made Monday (1 Dec), Thein Sein said that should workers overseas lose their jobs, Myanmar's agricultural sector by itself could employ millions.
Thein Sein said there are 46,057 Myanmar workers legally working abroad, but statistics from other countries and organizations estimate that more than2million are working abroad illegally, the New Light of Myanmar and other newspapers reported.
Thein Sein said millions of workers are needed in palm oil plantations, rubber plantations and teak plantations, and for timber extraction. Fisheries and the salt industry are also ready to hire workers, he said.
The foreign, labor and agriculture ministries all stand ready to help Myanmar workers who lost their overseas jobs, he added.
The prime minister conceded that the global economic crisis could have an indirect impact on Myanmar and destabilize local markets even though the effect on the monetary sector should be minimal because Myanmar's currency is not freely convertible so money transactions are not closely linked to foreign banks.
Thein Sein said Myanmar, which faces U.S. and European economic sanctions by the West because of the ruling junta's poor human rights record and failure to restore democracy, has no relations with Western monetary institutions. He also said Myanmar's foreign loan burden is insignificant compared to other countries, the New Light of Myanmar reported. (AP)
Posted by ကိုထိုက် at 10:13 10 comments
“ထိုင်ပါ၊ ဆရာမ” .. ဟုပြောရင်း
“ပေးစရာရှိတာလေးတွေကို ပေးမလို့ အခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ ဆရာမလည်း ငွေလိုရော့မယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာမကလည်း မတောင်းဘူး၊ ကောင်းပြီလေ။ အခုပေးတာပေါ့၊ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးဖို့ ဆရာမကို တစ်လ ရူဘယ် ၃၀ နဲ့ သဘောတူခဲ့တယ်နော်”
“တစ်လ ၄၀ ပါ”
“မဟုတ်ဘူး သုံးဆယ်။ ဒီမှာ စာနဲ့ သေသေချာချာရေးထားတယ်။ အိမ်မှာ ကလေးတွေကို စာလာပြပေးတဲ့ ဆရာမ မှန်သမျှ တစ်လ ရူဘယ် ၃၀ အမြဲပေးခဲ့တယ်။ ဆရာမ ဒီမှာ စာသင်ပေးနေတာ အခုဆိုရင် ၂ လ ရှိသွားပြီနော်”
“မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီနေ့ပါနဲ့ ပေါင်းမှ နှစ်လ တိတိ၊ အားလုံး ဒီမှာ စာနဲ့ ရေးမှတ်ထားတယ်။ အခု ဆရာမကို ပေးရမှာက နှစ်လစာဆိုတော့ ရူဘယ် ၆၀။ အဲဒီ အထဲက တနင်္ဂနွေ ၉ ရက်ကို နှုတ်ရဦးမယ်။ တနင်္ဂနွေတွေမှာ ဆရာမဟာ ကိုလျာကို စာမသင်ပေးခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ အားလပ်ရက်နဲ့ ပိတ်ရင် ၃ ရက်ပါသေးတယ်။”
“အားလပ်ရက် သုံးရက်၊ သုံးရက်အတွက် တစ်ဆယ့်နှစ်ရူဘယ်ဖြတ်ရမယ်။ ကိုလျာလေး နေမကောင်းဖြစ်ပြီး စာမသင်ခဲ့ရဘူး။ ဆရာမဟာ ဗာယာနဲ့ပဲ နေခဲ့ရတယ်။ အိမ်ရှင်မက ဆရာမကို ညစာ စားပြီးချိန်ဆိုရင် အနားပေးတယ်။ တစ်လ ၁၂ ရူဘယ်နဲ့ ခုနစ် ရူဘယ်ပေါင်းတော့ တစ်ဆယ့်ကိုး ရူဘယ်၊ လစာထဲက တစ်ဆယ့်ကိုး ရူဘယ်ကို နှုတ်တော့ လေးဆယ့်တစ်ရူဘယ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ မှန်တယ်နော်။”
“နှစ်သစ်ကူးပွဲ မတိုင်မီက လက္ဘရည် အချိုခွက်နဲ့ ပန်းကန်ပြား ဆရာမကြောင့် ကွဲသွားခဲ့တယ်။ အဲဒါအတွက် နှစ်ရူဘယ်၊ လက္ဘရည်ခွက်က အတော် တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ မိသားစု အစဉ်အဆက် ထိမ်းသိမ်းဆက်ခံလာတဲ့ ပစ္စည်းမို့ အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ထားပါတော့လေ။ ပိုပြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်ခဲ့တာရှိသေးတယ်။ ဆရာမရဲ့ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ကိုလျာဟာ သစ်ပင်ပေါ်တတ်လို့ အကျီစုတ်ပြဲသွားခဲ့တယ်။ အဲဒါအတွက် တစ်ဆယ် ရူဘယ်။ ဆရာမရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် အိမ်ဖေါ်မလေးက ဗာယာရဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်ကို ခိုးယူသွားခဲ့တယ်။ ဒါတွေ အားလုံးကို မျက်လုံး ဒေါက်ထောက်ကြည့်ရမှာက ဆရာမရဲ့ အလုပ်။ ဒါ့အတွက် ဆရာမကို ပိုက်ဆံပေးပြီးငှားထားတာကိုး။ အဲဒီအတွက် ငါး ရူဘယ်ဖြတ်မယ်။ ဇန်ဇဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့က ဆရာမ ကျုပ်ဆီက ငွေ ဆယ်ရူဘယ် ချေးခဲ့တယ်။”
“ဟင့်အင်း၊ ကျွန်မ ရှင့်ဆီက မချေးခဲ့ဖူးပါဘူး။” ဟု ဆရာမလေးက လေသံသဲ့သဲ့ဖြင့် ပြောသည်။
“ဒီမှာ အားလုံးကို စာနဲ့ရေးမှတ်ထားတယ်။”
“ဒါဆိုလည်း ကောင်းပါပြီ၊ နောက်တော့ကော”
“လေးဆယ့်တစ်ရူဘယ်ထဲကနေ နှစ်ဆယ့် ခုနစ် ရူဘယ်ကို နှုတ်တော့ တစ်ဆယ့်လေး ရူဘယ်ကျန်တယ်။”
“ကျွန်မ တစ်ခါပဲ ပိုက်ဆံချေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါ ရှင့်ဇနီးဆီက သုံးရူဘယ်ထဲရယ်ပါ။ ဒါ့ထက် တပြားမှ မပိုခဲ့ပါဘူး။”
“အဲဒါကို ထည့်မပြောခဲ့ခဲ့ဘဲကိုး။ အဲဒါ ကျုပ်စာထဲမှာ ရေးမမှတ်ရသေးဘူး။ တစ်ဆယ့်လေး ရူဘယ်ထဲက သုံးရူဘယ် ထပ်နှုတ်တော့ တစ်ဆယ့်တစ် ရူဘယ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဒီမှာ သုံးရူဘယ်၊ နောက် သုံးရူဘယ်၊ နောက်သုံးရူဘယ်၊ တစ်ရူဘယ်၊ တစ်ရူဘယ် အားလုံး တစ်ဆယ့်တစ် ရူဘယ်၊ အဲဒါ ဆရာမ ပိုက်ဆံ။”
“ကျေးဇူးပါပဲ” ဟု ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောသည်။
“နေပါဦး၊ ဆရာမက ကျွန်တော့်ကို ဘာအတွက် ကျေးဇူးတင်ရတာလဲ။” ဟု ခပ်ဆက်ဆက် မေးလိုက်သည်။
“ပိုက်ဆံ ပေးတဲ့ အတွက်ပါ။”
“ကျုပ် ခင်ဗျားကို ငွေလိမ်ပေးနေတာ၊ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး အေးဓားပြတိုက်နေတာ၊ ဘာပြုလို့ ကျုပ်ကို ကျေးဇူးတင်တာလဲ။”
“တခြားမှာဆို တပြားမှတောင် မရလို့ပါ။”
“တပြားမှ မရဘူး ဟုတ်လား၊ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ၊ အေးလေ .. ၊ အံ့သြစရာတော့ မရှိပါဘူး။ ကျုပ်ခင်ဗျားကို ရက်စက်တဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုကို ပေးချင်လို့ပါ။ ခင်ဗျား လစာ နှစ်လအတွက် ရူဘယ်ရှစ်ဆယ်လုံးလုံး၊ အပြည့်ပေးမှာပါ။ ဟောဟိုက စာအိပ်ထဲမှာ အပြည့်ထည့်ထားပါတယ်။ ဆရာမ ... ဘာပြုလို့ ခင်ဗျား ဒီလောက် ပျော့ညံ့ရတာလဲ။ မဟုတ်တာ ဘာပြုလို့ ပြန်မပြောရဲရတာလဲ။ မဟုတ်တာကို ပြန်ပြောရဲရမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘဝမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး နေလို့ ရတော့မှာလဲ။ ဒီလို ပျော့ညံ့လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
Posted by ကိုထိုက် at 18:36 8 comments